ማሕልየ መሓልይ 8 NASV – Nnwom Mu Dwom 8 ASCB | Biblica
ማሕልየ መሓልይ 8 NASV – Nnwom Mu Dwom 8 ASCB
a wonum me maame nufu ano,
ɛna mehunuu wo wɔ abɔntene so a,
anka mɛfe wʼano,
a obiara ntumi mmu me animtiaa.
2Anka mɛdi wʼanim
na mede wo aba me maame efie,
ɔno a woakyerɛkyerɛ me.
me ateaa mu nsuo dɔkɔ dɔkɔ no bi.
3Ne nsa benkum da mʼatikɔ
4Yerusalem mmammaa, mehyɛ mo sɛ,
morennyane na morenhwanyane ɔdɔ mu
kɔsi ɛberɛ a ɛsɛ mu.
5Hwan na ɔfiri ɛserɛ so reba a
ɔtwere ne dɔfoɔ kokom yi?
Mekanyanee wo wɔ aprɛ dua no ase;
ɛhɔ na wo maame nyinsɛnee woɔ,
ɛhɔ na deɛ ɔkoo awoɔ no woo woɔ.
6Fa me to wʼakoma so sɛ nsɔanodeɛ,
sɛ nsɔanodeɛ wɔ wʼabasa so,
ɛfiri sɛ ɔdɔ ano yɛ den sɛ owuo,
ne ninkunutweɛ tim hɔ sɛ damena.
Ɛhyehye sɛ ogyadɛreɛ,
sɛ ogyaframa a ano yɛ den pa ara.
7Nsuo dodoɔ rentumi nnum ɔdɔ;
nsubɔntene rentumi nhohoro nkɔ.
Sɛ obi de ne fie ahonya nyinaa bɛsesa ɔdɔ a
anka wɔremmu no adeɛ a ɛsom bo.
8Yɛwɔ nuabaa akumaa bi a,
ne nufu mmobɔeɛ.
Ɛdeɛn na yɛbɛyɛ ama yɛn nuabaa yi
wɔ da a wɔbɛbisa no ase?
9Sɛ ɔyɛ ɔfasuo a,
yɛbɛsi dwetɛ abantenten abɔ ne ho ban.
Sɛ ɔyɛ ɛpono a,
yɛde ntweneduro bɛsi ne ɛpono no kwan.
ɔde deɛ ɛsɔ ani reba.
ɔde ne bobeturo no maa apaafoɔ.
12Nanso me bobeturo yi yɛ me dea.
Me deɛ, meremfa mma;
Salomo de ne deɛ gye nnwetɛbena apem,
na ɔtua nʼapaafoɔ nnwetɛbena ahaanu ma wɔhwɛ ne nnuaba no so.
14Bra ma yɛnkɔ, me dɔfoɔ,
anaasɛ ɔforoteɛ ba a
ɔwɔ mmepɔ a nnuhwam ahyɛ so ma so.
ASCB : Nnwom Mu Dwom 8